गाेकुल बास्काेटा भन्छन – देशभक्त नेताहरू टुकी बालेर खाेज्ने दिन आए
चितवन । नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनाइरहँदा गठबन्धन सरकार चुप लागेर बसेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन्।
प्रेस चौतारी नेपाल चितवन शाखाले बिहीबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बास्कोटाले यस्तो बताएका हुन्।नेपाली भूमिमा विदेशीले बाटो बनाउँदा पनि गैर देशभक्तहरूको परमादेश सरकार चुप लागेर बसेको आरोप उनले लगाए।
तत्कालीन एमाले सरकारविरुद्ध बोल्न पाइन्छ भन्दै मुखमा टेप टाँसेकी मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीप्रति कटाक्ष गर्दै उनले देशभक्त मन्त्रीलाई टुकी बालेर खोजिरहेको बताए।
संसदबाट सर्वसम्मतिले पास भएको नक्सामा समेटिएको भूमागमा भारतले सडक बनाउँदा देशभक्तहरूको पार्टी एमालेले मुख खोलेको उनले बताएका छन्।
‘भारतीय अधिकारीहरूले हाम्रो संसदबाट सर्वसम्मतिले पास भएको नक्सामा भएको भूभागबाट अरू कसैले सडक बनाइरहँदा मुखमा टेप टाँसेर बोल्न पाइन्छ भन्ने मन्त्रीहरू र सरकार कहाँ छ अहिले खोज्नुस्', उनले भने, 'म ती मन्त्रीहरू खोज्दै छु। देशभक्त मन्त्रीहरू टर्च होइन, टुकी बालेर खोज्दै छु। खै कहाँ गए? त्यसबारे बोल्नु पर्दैन? एमाले त बोलिसक्यो।'
प्रत्येक नेपाली नागरिक देशभक्त रहेको भन्दै उनले अब जनताले एमालेको सरकार बनाउने दाबी गरे।बास्कोटाले सर्वोच्च अदालत सधैँ एमालेप्रति पूर्वाग्रही हुने गरेको आरोप समेत लगाए। ‘अदालत एमालेप्रति पूर्वाग्रही भएको हो। त्यो कुरा स्पष्ट देखिएको छ', उनले भने, 'सदाझैँ एमालेप्रति पूर्वाग्रही भएर अदालत उभिएको तथ्यहरूले बताउँछन्।’